Tongolo gasy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Tongolo gasy
Teknika amin'ny fambolena tongolo lay ho an'ny ririnina
Ny garlic dia zavamaniry maharitra. Raha manapa-kevitra ny hitombo ny tongolo ririnina ianao dia tsara kokoa ny mikarakara izany amin'ny fahalavoana. Nambolena tamin'ny ririnina io orinasa madinika io, amin'ny herintaona, dia hahazo tongolo gilasy tena tsara sy maitso. Fantatrao ve? Ny tongolo gasy dia nahazo laza malaza ary manana karazany maherin'ny 70.
Ny fanimbana ny tongolo lay ho an'ny vatan'olombelona
Azo antoka fa fantatry ny olon-drehetra hatramin'ny fahazazany fa dokotera tena ilaina tokoa ny tongolo lay, indrindra amin'ny ririnina. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia tena malemy ny fiarovana ny olona iray. Noho izany, ny rehetra dia asaina ampiasaina amin'ny tongolo gasy mba hisorohana ny fisorohana. Saingy tsy misy mieritreritra fa mety ho manan-danja ihany koa ny fahasimbana amin'ny tongolo lay. Farafaharatsiny, ny tsy fisian'ny tongolo lay dia azo lazaina ho fofona.
Varotra fampiasa amin'ny tongolo lay: fanangonana sy fananana mahasoa
Ny fahatsapana voalohany amin'ny fanononan'ny tongolo lay dia ny fofony (avy amin'ny solifara). Ny olona toa azy, ny hafa tsy. Saingy ny santionan'ny tongolo lay dia zavatra iray, fa ny tena ilaina amin'ny tongolo lay (ny sandany) dia zava-misy marina sy zava-tsarotra. Andeha hojerentsika io zava-misy io avy amin'ny fomba fijery samihafa. Ny vidin'ny sakafo eo amin'ny latabatra Ny tongolo lay dia misy endriny telo: vaovao, anaty vovo, ary koa amin'ny endriky ny volom-borona.
Ny fotoana tsara indrindra hanamboarana tongolo gilasy, na fotoana hanamboarana tongolo gilasy
Ny tongolo gasy dia tena ilaina tokoa ho an'ny sakafo maro izay mahazatra antsika, marinady, ary fitehirizana, ary ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny hatsiaka. Maro ihany koa ireo fomba fitsaboana nentim-paharazana ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana mba hanatsarana ny hery fanefitra, hanatsara ny asan'ny fo, hanadiovana sy hamelomana indray ny vatana. Tsy ratsy ho an'ireo tanjona rehetra ireo ny nitombo teo amin'ny fandriananao, ary tsy nividy tongolo lay.
Sakamandimby ho an'ny ririnina, fomba fitehirizana tongolo lay mandritra ny ririnina
Tsy dia mahasalama loatra sy mandoro, mampiseho fofona mahavariana sy tsirony miavaka - ireo no epithets izay mamaritra tsara indrindra ny tongolo lay. Azonao atao ny mahafeno tanteraka ity vokatra ity amin'ny trano iray, na vaovao na ampahany amin'ny karazan-tsakafo isan-karazany, fitafy sy biriky. Ny lazan'ny tongolo lay dia tsy azo iadian-kevitra, ka noho izany, ny mponin'ny lohataona mavitrika dia tsy mikatsaka fotsiny ny fanangonam-bokatra ao amin'ny taniny, fa koa ny fanangonam-bokatra amin'ny ririnina, raha lasa tongolo maina ny tongolo lay.
Pikantsary mahavelona: Mahasoa ny vokatra
Ny tongolo lay sy ny zana-tsipìkan'ny zana-tsipìka, ny fampiasana azy dia manohana ny siansa, dia malaza fa tsy sakafo vokatry ny sakafo, fa fanafody ihany koa. Ny tongolo lay sy ny tombony ho an'ny vatana dia fantatra fa saika ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tany amin'ny firenena samihafa, dia nampiasaina tamin'ny fomba mahomby izy io tamin'ny fanasitranana sy ny fitsaboana hatramin'izay. Ny tongolo lay dia toy ny fanafody ho an'ny immunodulator sasany, mampitombo ny fiarovana ny hery fiarovan'ny vatan'ny olona sy ny fisorohana ny ratra, aretim-pivalanana ary aretina virosy.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny fanangonan'ny tongolo lay mandritra ny ririnina
Ankehitriny, ireo vehivavy za-draharaha dia nahazo karazana fomba maro hitahiry legioma amin'ny ririnina. Ary ny tongolo lay dia tsy manan-danja, satria ny tongolo gasy dia mitazona ny toetra mahasoa rehetra, ny tsirony sy ny tsirony. Tehirizo ao amin'ny efitranon'ny kamiao ny vata fampangatsiahana. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hanomezana tongolo lay ho an'ny ririnina.
Mitombo ny tongolo lay: fambolena sy fiahiana eny an-tsaha
Maro amintsika no mampiasa tongolo lay ho an'ny sehatry ny kulinar na fanafody, saingy vitsy no mahalala hoe karazana kolotsaina ny zavamaniry. Anisan'ny zavamaniry ao amin'ny fianakavian'ny Onion izy ireo, maro ireo mpamboly amina ambaratonga voalohany amin'ny fitomboan'ny tongolo lay dia mety hampangotraka azy amin'ny tsimparifary ary hanala azy ireo amin'ny farafara, ka tsy hahafahany manome vitaminina.
Nahoana ny tovovavy amam-bozaka no miverina mavo amin'ny lohataona ary inona no tokony hatao
Amin'ny lohataona ao amin'ilay tranokala, maro amin'ireo mponina amin'ny fahavaratra no mahita fambolena voninkazo manjelanjelatra. Ary ity dia tsy vokatra tsy dia fahita ihany, fa koa marika fa ny teknolojia ara-pambolena amin'ny tongolo gilasy dia mitapaka. Na izany na tsy izany, manohy ny fitomboan'ny zavamaniry ny zavamaniry, ary mipetaka ny gnou. Nahoana ny tovovavy amam-bongo no mivadika mavo amin'ny lohataona ary inona no tokony hatao, heverintsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny hanomezana tongolo lay sy tongolo amiônika
Isika dia zatra mieritreritra amoniana, zava-mahadomelina izay ampiasaina hamelana olona maratra amin'ny fitsaboana ny neuralgia, myositis, ary miteraka ranomafana. Saingy hita fa ny fampiasana amoniaka ao amin'ny zaridaina dia azo atao - indrindra fa ny fandroana sy ny fambolena ny gilasy: tongolo sy tongolo.
Karazana tongolo lay tokony hambolena alohan'ny ririnina: karazany ambony
Ny voankazo dia zavamaniry iray an'ny fianakaviana Amarallis. Io no iray amin'ny voankazo mahazatra indrindra eran-tany. Ampiasaina ao amin'ny sakafo sy fanafody izy io. Olona 17 tapitrisa taonina eo ho eo no voangona isan-taona. Io legioma io dia mety hitombo amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Ao amin'ity lahatsoratra ity no handinihantsika amin'ny an-tsipiriany ireo karazana malaza sy tsara indrindra amin'ny tongolo gilasy (miaraka amin'ny sary).
Ny karazam-borona amin'ny lohataonan'ny lohataona
Hanampy ireo mpankafy tongolo lay ity lahatsoratra ity ary te-hampitombo io zavamaniry tena ilaina io ao amin'ny zaridainany. Ao anatin'izany dia hahita lisitry ny karazana voankazo mahazatra amin'ny lohataona miaraka amin'ny sary sy famaritana izay hanampy anao hanapa-kevitra momba ny karazana zavamaniry izay mety aminao.
Oviana ary ahoana no fomba amam-potoana amin'ny fomba fambolena voalavo
Ny tongolo lay dia vahiny matetika eo amin'ny latabatra, indrindra amin'ny fararano-ririnina. Manana tsiro marevaka sy fofona mahery ny tongolo lay no tena ilaina amin'ny lovia, sôsa sy salady. Ny tongolo lay dia ny ririnina sy ny lohataona. Tena mora ny manavaka ireo karazana samy hafa ireo - misy gony 5-6 eo amin'ny lohan'ny tongolo gilasy, ary eo afovoany dia misy lakaoly sandoka, eo am-tampon'ny tongolo lay lohataona misy akanjo maro (10-20), tsy misy loto diso.
Ahoana no hametrahana tongolo lay amin'ny ririnina?
Maro ny mpikaroka maniry tongolo lay eo amin'ny faritra misy azy, ary rehefa tonga ny fotoam-pijinjana dia mitranga ny fitehirizana azy. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hitahirizana tongolo lay mandritra ny ririnina any an-trano mba tsy ho maina, eritrereto ny fomba maro hitehirizana azy. Ny fanangonana ny fambolena amin'ny fambolena azy amin'ny ririnina dia tokony atao mandritra ny vanim-potoana iray.
Ahoana no handoavana tongolo lay, ary impiry?
Fantatry ny zaridaina za-draharaha: raha manomana tsara ny fandroana ny zaridaina ianao, dia tsy vitan'ny hoe mamonjy ny volo sy ny voankazo avy amin'ny olana maro, fa mampitombo ihany koa ny habetsahan'ny fijinjana amin'ny hoavy. Androany dia hiresaka momba ny kolontsaina iray izay mangataka ny famonoana, izay manana rafitra fakam-bary maivana ary mila filalaovana be dia be mandritra ny vanim-potoana manokana amin'ny fivoarany.
Mianatra ny fepetra amin'ny fambolena tongolo lay izahay
Ny zavamaniry isan-taona dia manome vitaminina betsaka amin'ny fahavaratra sy amin'ny ririnina. Mba hampitombo ny tongolo lay ao amin'ny zaridainanao, mitobia eo amin'izy ireo amin'ny ririnina, mila mahafantatra ireo antony manan-danja ianao: mametraka, ny fotoana sy ny fepetra momba ny fambolena. Araho ny toro-hevitra fanampiny ary azonao atao ny mamelona ny vokatra vokarina mandritra ny herintaona.
Voankazo maina: ny soa sy ny loza, ny sakafo
Ny tongolobe dia fantatra amin'ny maro ho sangom-panirian-tsakafo sy mahasalama, manome ny sakafo ho fanandramana manokana sy fofona. Izy dia malaza amin'ny fananany medikaly ary tena ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Nantsoin'i Pythagore hoe "mpanjakan'ny zavapisotro" izy, ary ireo Slavy dia nanantona azy tao an-trano ho fiarovana amin'ny fanahy ratsy sy fanahy ratsy. Angano maro no mandalo io zavamaniry mahavariana io sy ny toetrany mahagaga sy manasitrana.
Tena ilaina ny tongolo lay efa voamaina sy ny fomba hanala azy
Ny tongolo gibika dia efa nametraka ny tenany ho toy ny singa ho an'ny fofomamy isan-karazany amin'ny trano fandraisam-bahiny. Nefa vitsy no mahalala hoe karazana zava-mahasoa sy mampidi-doza manala ny tongolo lay ao anatiny. Andao hijery ity olana ity miaraka. Ny tongolo gny fofona: ny endriny sy ny tsirony Ny endriky ny vokatra vita dia miankina betsaka amin'ny fomba nanombohananao ny fandroana azy: nopokapoka manontolo, na nokarohinao tamin'ny ala, nopotehiny tamin'ny sombin-tsavoka na nipaipaika .
Garlic "Lyubasha": endri-javatra amin'ny karazany sy ny fambolena
Maro ny zaridaina no maniry ny karazam-bolo amin'ny ririnina. Na izany na tsy izany, efa maraina be izy ireo, ankoatra ny fanomezana vokatra be. Anisan'ireny varieties ireny no manavaka tsara ny tongolo lay "Lyubasha", izay manana tombony maro, izany no mahatonga azy hitarika ny zaridaina. Description Variety "Lyubasha" - zaridaina Okrainiana, saingy mety tsara ho an'ny fambolena tsy ao Okraina, fa koa ao Rosia, Belarosia, Moldavia.
Oviana ary ahoana no fomba hanoratana tongolo lay in Siberia: torohevitra mahasoa
Ny voankazo, tsy isalasalana, dia iray amin'ireo vokatra voajanahary malaza indrindra novolavolain'ny olombelona. Efa hatramin'ny ela no nahafantarana ny toetra tsara sy ny fanasitranana tsara. Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ireo fambolena amin'ny famokarana tongolo lay ao Siberia. Ny karazana tsara indrindra amin'ny ririnina amin'ny ririnina Amin'ireo karazana tongolo gilasy, ireto manaraka ireto dia malaza any amin'ireo tantsaha Siberiana: "varimbazaha" ny lokony, ny loko dia mavokely volomparasy, ny lanjany dia mety hahatratra 35 g, ny tsiranoka marevaka, ny fambolena azo antoka, ny vary dia mahasosotra ny virosy maitso maitso; Ny "SIR 10" dia karazana vary afovoan-jazakely, ny loko dia maivana maivana, ny lanjany dia afaka manatratra 30 g, tsiro manjavozavo, ny fahasamihafana dia miorina amin'ny aretina, fa indraindray dia mety ho simban'ny bakteria; Ny "Skiff" dia karazana varimbazaha miditra, ny lohany dia fotsy miaraka amin'ny alokaloka manilika, ny lanjany dia afaka manatratra 30 g, tsiro manjopiaka, ny fahasamihafana dia marefo amin'ny aretina, fa indraindray dia voan'ny bakteriosis sy fotsy fotsy; Ny "Autumn" dia karazana varimbazaha voalamina tsara, fotsy ny fotsy, saingy misy volompà volomparasy na volomparasy volom-borona, mety hahatratra 40 g, ny tsiranoka marevaka, manohitra ny aretina. Ny "azo itokisana" dia karazany iray midadasika, ary ny lanjany dia fotsy miaraka amin'ny alokaloka manjopiaka, ny lanjany dia mahatratra 70 g, ny tsirony mahavariana, manohitra ny aretina, ary ny fisehony dia manana fitandremana tsara, izay ahafahanao mitahiry ny vokatra mandritra ny 11 volana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Tongolo gasy